Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Halgan Xaq ah Nimaan Daacad Ahayn Kumasii Dhex Jiri Karo – Xuseen Noor
Faallo: Halgan Xaq ah Nimaan Daacad Ahayn Kumasii Dhex Jiri Karo – Xuseen Noor
Posted by ONA Admin	/ April 27, 2017
Waxaa jira Qawaaniin uu Ilaahay u dajiyay koonkan (Scientific Laws) oo miisaaman, banii aadamkana uu Ilaahay faray in aan dhiilitirkaa aan lagu xadgudbin ( وو ضع الميزان – ألا تطغوا في الميز ان ). Marka laga yimaado koonkan balaadhan ee isku dheelitiran, wuxuu kaloo Ilaahay u dajiyay banii-aadamka qawaaniin hadday ku xad-gudbaan ay ka muuqanayso natiijada ka dhalanaysa.
Waxaa ka mid ah; nifaaqa ay culumada Somalida ku sharxaan (Kufri calooleed) oy ula jeedaan qof muuqaalka sheeganaya inuu yahay daacad hoostana ka wata khiyaano. Ilaahay wuxuu sheegay qofka sidaa ah inuu fashilinayo intuu dunida dul saaran yahay si loogu cibrad qaato.
قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾ [سورة محمد – الآية 29]، ((أي: أيعتقد المنافقون أنَّ الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجَلِّيه حتى يفهمهم ذوو الأبصار)) [عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير “مختصر تفسير القرآن العظيم” – أحمد شاكر]، والمرض الذي في قلوبهم إنما هو ((مِن شُبهة أو شهوة بحيث تُخرِج القلب عن حال صحته واعتداله)) [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان – عبد الرحمن السعدي].
Aayadan wuxuu Ilaahay ugu goodinayaa kuwa munaafiqiinta ah, Ma waxay la tahay munaafiqiinta inuusan Ilaahay tusaynin mu’miniinta arimahooda? Taasi dhab maha ee Ilaahay wuu kashifi arimahooda banaankuuna soo dhigi si kuwa caqliga iyo basiirada leh ay u fahmaan. Sidaa waxaa ku fasiray aayada Ibn Kathiir. Cudurka uu Ilaahay sheegay inuu ku jiro qalbigoodana waxaa lagu fasiray inay ka mid yihiin, Shubha iyo Shahwa, oo macnihiisu yahay Shaki iyo (Shahwa) oo macnahiisa carabiga uu aad u guda balaadhan yahay, oo ah waxkasta oo aduunya ah oo nafta ay jeceshahay; maal, xukun, galmada iwm.
Waxaa halkaa inooga muuqanaya, qofka halgan xaq ah oo muqadas ah ku jira, marka ay naftiisa ku dhacdo (Shubha iyo Shahwa) inuusan halganka sii wadi karin. Isagoon meelnaba sii gaadhin ayaa waxaa durbadiiba isbadalaya hadaladiisii oo waxaa kasoo baxaya ereyo muujinaya inuu naftiisa wax la doonayo. Arintaa markay ku bilaabato, waxaa isu muuqanaya isla markiiba isaga iyo cadawgii halganka, wuxuuna si dhib yar ugu dhacayaa gacanta cadawga oo u balan qaadaya inuu diyaar ula yahay waxay naftiisa jeclayd ee macmacaansiga ahaa.
Kooxda hadda ku dhawaaqday inay yihiin Gole wadatashi iyo Badbaado waxay soo qaateen caalamadii ururka, taasi waxay muujinaysaa in ay aaminsan yihiin in aanay waxba khaldi karin iyagoon soo huwanin shaadhkaa jabhadda. Waxay halkaa isku cadeeyeen inay ahaayeen munaafiqiin hadayba ku dhex jireen oy ka mid ahaayeen JWXO. Halkaa waxaa inooga muuqanaya oo kale in balantuu Ilaahay u qaaday dadka daacadda u ah qadiyadooda ee ahayd inuu ka dhex saarayo munaafiqiinta ku dhex jira. Waxaa intaa dheer, oo u baahan in si fiican looga bogto, dadkan meesha isku soo camiray midwalba wuxuu ahaa sanad ama laba sano ka hor ama waligiiba. Qaar aan aqaano oo xidhiidh halgan iyo mid saaxiibtinimaba ay na dhex mareen, markaan ku dhex arkay sawirka ama liiska, runtii waxaan xaqiiqasaday inay qadiyadan tahay mid xaq ah oo Ilaahay uu la jiro.
Waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkuu Ilaahay yidhi ee ahaa; Waxaa jira wax aad jeceshihiin oo shar idiin ah iyo waxaad neceb tihiin oo khayr idiin ah. Waan jecel nahay qofkasta oo halganka nala wada inuusan cadawga gacanta u galin, hasa ahaatee Ilaahay ma jecla qof munaafaq ah inuu ku dhex jiro safka oo aan la ogaanin.